Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Ireo mpandeha MENA vonona hanao vaksiny raha vantany vao misy ny vaksinin'ny COVID-19
Antenaina fa hanao laharam-pahamehana ireo toerana misy ny mpizahatany izay nanao vaksiny ny ankamaroan'ny mponina ary nahomby tamin'ny alàlan'ny COVID-19
Ny 77% amin'ireo mpandeha MENA dia vonona ny hanao vaksinin'ny COVID-19
45% ny mpandeha MENA mikasa ny handeha mandritra ny volana manaraka
31% ny mpandeha MENA mikasa ny handeha amin'ny fialantsasatra mihaja na fialamboly
Ny fanadihadiana farany nataon'ny mpandeha an'arivony maro tao MENA dia nanambara fa ny 77% amin'ireo olona ao amin'ilay faritra dia mikasa ny hanao vaksiny raha vantany vao misy io vaksiny io any amin'ny fireneny.
Mandritra ny telovolana manaraka dia antenaina fa hanao laharam-pahamehana ireo toerana misy ny mpizahatany izay nanao vaksiny ny ankamaroan'ny mponina ary nahomby tamin'ny alàlan'ny COVID-19.
45% ny valinteny rehetra izay mikasa ny handeha mandritra ny volana manaraka na latsaka. Ny fanadihadiana dia naneho ihany koa ireo karazana safidy fialan-tsasatra malaza indrindra ho an'ny mpandeha MENA, miaraka amin'ny 36% misafidy fialan-tsasatra mihoampampana ary 26% fitsangatsanganana miaraka amin'ny fianakaviany.
Raha ny angom-baovao farany, ny toerana fialan-tsasatra izay nahita fitomboana betsaka indrindra tamin'ny volan'ny fikarohana nandritra ny telovolana voalohany dia:
● Seychelles nahita fiakarana 62%
● Nahitana fiakarana 45% i Thailand
● Nahitana fiakarana 40% i Maldives
● Nahitana fiakarana 30% i UK
● Nahitana fiakarana 29% i Norvezy
● Nahitana fiakarana 19% i Espana
Ny hafainganam-pandehan'ilay vaksinina any amin'ny toeran'ireo fizahantany dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny olona mandeha indray. Satria manohy mandroso sy miakatra ny mpitarika ny faritra GCC ary mitarika ny vaksiny, dia mino ny manam-pahaizana momba ny dia fa maro ny mpandeha no mahazo toky fa afaka mivezivezy afaka volana vitsivitsy. Ny areti-mandringana dia nanova ny fihetsiky ny mpandeha ihany koa ary ny ankamaroany dia misafidy fialan-tsasatra sy fialantsasatra ho an'ny fahasalamana amin'ny toerana mahafinaritra sy fialamboly.
Mikasika ireo traikefa izay nitaky fangatahana be indrindra tamin'ny 2021, dia nisy ny fitomboan'ny asa an-trano sy ny zava-niainana teo an-toerana satria miaina hetsika fialam-boly amin'ny toerana akaiky azy ireo ny mpandeha.
Ny mpitsangatsangana koa dia mampiseho fahalianana amin'ireo diany natao ho azy manokana, mitady halavirana ara-tsosialy sy rivotra madio nefa tsy esorina ny fahatsapana ho mampientanentana.
Ny fanadihadiana ihany koa dia mampiseho fa 37% ny olona mikasa ny handeha irery raha 33% kosa dia hanao dia miaraka amin'ny fianakaviany mankany amin'ny fialantsasatra miala sasatra.
Ny mpitsangatsangana koa dia maniry ny handany fialan-tsasatra lava kokoa miaraka amin'ny drafitra 62% hamandrihana ny diany mandritra ny 10 andro, amin'ny fampiasana ny fotoanany amin'ny toerana tiany haleha.